Arakan Eagle: April 2014
Posted by Eagle info dash at 18:24 No comments:
The 'Rohingya' Identity - British experience in Arakan 1826-1948
Posted by Ven. Indobhasa Sunday, April 20, 2014
There isavery simple answer to the matter of British practice. There was no such identity as ‘Rohingya’ known to the British Governments of either India until 1937 or of Burma after the separation from India on 1 April of that year. In the 122 years between their conquest of Arakan in 1826 and Burmese independence in 1948, notasingle reference to ‘Rohingya’ is to be found in any British official report, regional gazetteer, census, legislation, private correspondence or personal reminiscence. Even if suchaself-identification had been made, the census enumerator would have written ‘Chittagonian’ as they were under instructions to do in both the 1921 and 1931 censuses if alternative identities were offered, such as ‘Kawtaw’,'Barna’, ‘Babuji’ or ‘Magh’.
“By means of that mysterious sympathy – the despair of the average European – which enables Asiatics of all kinds to communicate with one another with apparent freedom on the veriest minimum ofacommon vocabulary, the Burmese enumerator has, doubtless, despite his ignorance of the alien’s tongue, generally succeeded in making his native of India understand that what he wished to ascertain was his ‘Zat’ or caste……”. Paragraph 157 - 1901 Burma Census Report edited by C C Lowis, Census Superintendent
The ‘Arakan Mohamedans’ comprised 26,153 males and 25,462 females, an even balance between the sexes as you would expect inalong-standing permanent community, while ‘Chittagonian’ males outnumbered females by two to one and ‘Bengali’ by three to one –aratio, I would have thought, which might favour polyandry rather than polygamy.
‘Chittagonian’ is hardlyaracial, ratheralinguistic and geographical designation. “It might be argued that the figures for Chittagonians should be included in those for Bengalis”, noted the 1931 Census Report, “but there is no harm done in giving separate figures for them.” The language spoken though by both groups was listed simply as ‘Bengali’. In the 2014 Census, the language spoken at home was notaquestion asked.
This word ‘Rooinga’ would appear to mean no more than ‘Arakaner’ –ageographic locator rather than an ethnic designation. It would seem to be derived from one of the many Bengali names used to describe Arakan. As Buchanan put it in his 1798 “Account ofaJourney in South East Bengal”: “Various parts of the hills are inhabited by Mugs [Rakhine] from Rossawn, Rohhawn, Roang, Reng or Rung, for by all these name is Arakan called by the Bengalese”. Buchanan went on to say: “These people left their country on its conquest by the Burmas [i.e. Burmans], and subsist by fishing, Boat building,alittle cultivation, and by the Cloth made by their Women. They also build houses for the Mohammedan refugees, of whom many came from Arakan on the same occasion, and settling among men of their own Sect, are now much better off than their former Masters [the 'Mugs'].”
Editor - ‘Network Myanmar’
Posted by Eagle info dash at 14:31 No comments:
-တစ်ခါက မြန်မာပြည်မှ လူထုအစည်းအဝေးပွဲတစ်ခု ..
-ခေါင်းဆောင်လုပ်သူ...( လူများသတ်လိုသေသွားသူများကို တစ်ခါကုန်း….)
-လူထုများ (ခေါင်းညွတ် အရိုအသေပြုကြလေ၏)..
အတန်ကြာနေသော်... (တော်လောက်ပါပြီကွယ် ) ဟုပြော၏ ။
-ထိုနောက် ရှေတွင်ထိုင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးမှ
( သူများသတ်ပြီး မသေခဲ ရင်ရော…တစ်ခါ ကုန်း ရ မှာလား လိုမေးရာ...)
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူမှ ..(ဒါဆိုလဲ သူများမသတ် လို သေသွားသူများအား တခါကုန်းဟု ) ပြောရာ လူများ ခေါင်းငုံကြပြန်၏။
အတန်ကြာသော် ခေါင်းဆောင်လုပ်သူကပင် (တော်လောက်ပါပြီကွယ်ဟု ပြောသောကြောင့် ခေါင်းမော့ကာ နေရပြန်၏။
ထိုရှေ့တွင်ထိုင်နေသော အထက်က ပုဂ္ဂိုလ်မှ တဖန်မေးသည်မှာ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်သူ သေသွားလို ခဏခဏ ကုန်းခိုင်းနေတာလဲ ကျွန်ပ်တိုလဲ မသိရပါလား
ဘယ်သူတုန်း ဒီနယ်မြေ(တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် တွေ) ကို ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ လူလား။
ခင်ဗျားတို့ အချင်းချင်း (NLD- USDP) ရန်ဖြစ်တိုင်း ကျွန်ပ် တို့ကို ကုန်းခိုင်းနေတာပဲ ဒီတစ်ခါတော့ မကုန်းနိုင်တော့ဘူး..... ခင်ဗျား တော်လောက်ပြီ ဆိုလဲ မကုန်းတော့ဘူးဗျာ ဟု ထွက်သွားလေတောသတည်း။
( တော်လောက်ပါပြီ ကွယ်…)။
ပိုင်ပိုင် ပြောတာ ကို ပြန်လည်ရေဖွဲပါသည်။
Posted by Eagle info dash at 07:22 No comments:
Labels: Article, Politic, နိုင်cံရေး
နရသိင်္ဃ ဥစ္စနာမင်း(၁၂၃၀-၁၂၃၅)ရဲ့ သမီးကျောက်စာမှာ " ငမဟိက မြက်နုရိယ်ကြည်ဟိရာ လာစိယ်သတေ" လို့ ကျွန်တွေကို လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်(လှူ ခဲ့ပါတယ်)။ ဒီနေ့ စာနဲ့ ပြန်ရေးရရင် " ငါမရှိက မြက်နုရေကြည်ရှိရာ သွားစေသတည်း " လို့ဖြစ်ပါတယ်။
(ငမဟိက)မှာ "ဟိ" ဝေါဟာရကို ရခိုင်တွေ ဒီနေ့အချိန်ထိ (ဟိ)ကို သုံးစွဲနေတုံးဖြစ် ပါတယ်။(မြက်နုရိယ်ကြည်)မှာလည်း " ရိယ်" ကို မြန်မာလို (ရေ)လို့ ဒီနေ့အချိန်မှာ သုံးစွဲနေပေမယ့် ရခိုင်တွေကတော့ " ရိယ် " ကို (ရီ)လို့ ဆက်လက်သုံးစွဲနေဆဲဖြစ် ...ပါတယ်။
(လာစိယ်သတေ)မှာ လာက လားကိုရေးတာ ထင်ရှားပါတယ်။ လားဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ရခိုင်တွေ ဒီနေ့အချိန်ထိ သုံးစွဲနေပေမယ့် မြန်မာတွေကတော့(သွား)ကို သုံးနေကြ ပါတယ်။ (လာစိယ်သတေ)မှာဘဲ (စိယ်) အသံထွက်ကို ရခိုင်တွေက (စီ)လို့ ဒီအတိုင်းထွက်နေကြပေမယ့် မြန်မာတွေကတော့ (စေ)လို့ အသံထွက်ပါတယ်။
ကျောက်စာအပြင် ပေထက်အက္ခရာတင်တဲ့ အခါမှာလည်း ဒီနေ့ မြန်မာတွေ ရေးသလို " ပေ" လို့မရေးဘဲ " ပိယ်" လို့ ရေးပါတယ်။ " ပိယ်" ကို ရခိုင်တွေ ဒီနေ့အချိန်ထိ " ပီ" လို့ သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ပုဂံကျောက်စာ ဆုတောင်းတစ်ခုမှာ " နိဗ္ဗန်မည်သော မသိယ်ပြည်လျှင် ၀င်ရလိုဝ်သတေ" ဖြစ်ပါတယ်။ အသေအချာ စူးစိုက်ဖတ်ရင် ဖတ်နိုင်တဲ့ အရေး အသားပါ။ အဲဒီဆုတောင်းမှာ (မသိယ်)ဆိုတာ (မသီ)ဆိုတဲ့ ရခိုင်ဝေါဟာရ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်တွေ လက်ရှိအချိန်ထိ သုံးစွဲနေတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
" ငါဖ္လစ်လိယ်ရရ အရပ်" ဆိုတာကတော့ (ငါဖြစ်လေရာ အရပ်)လို့ ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စကားရပ်မှာ " လိယ်" ကတော့ ရခိုင်တွေ ဒီနေ့ အချိန်ထိ သုံးစွဲနေတဲ့ (လီ)ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံ အမိန့်ပြန်တမ်းတစ်ခုမှာတော့ " ခြိယ်လက်ဖြတ်သော" ဆိုတာ ပါရှိပါတယ်။ မြန်မာလို ခြေလက်ဖြတ်သော ဖြစ်ပါတယ်။ " ခြိယ်" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကတော့ ရခိုင်တွေ ဒီနေ့ အချိန်ထိ သုံးစွဲနေ " ခြီ " ဖြစ်ကြောင်းပါ ။ ။
ငြိမ်းချမ်းစွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါစေ --
Posted by Eagle info dash at 23:28 No comments:
ရခိုင်ဘုရားပေါင်း - “သဇင်ပန်းခိုင် တမြိုင်မြိုင်”
မြောက်ဦးဘုရားပေါင်း - “အုန်းပန်းပွင့်ခိုင်၊ တမြိုင်မြိုင်”
ရခိုင်အလောင်း စုစုပေါင်း- “တင်းဝါးပန်းခိုင် တမြိုင်မြိုင်”...
(ရဟန်း) သာသနာ ၀န်ထမ်းပေါင်း - “၀ါဝါ၀င်းဝင်း မြစ်ကိုဆင်း”
ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါင်း - “သုံးထောင်ခုနှစ်ရာ ၊ သုံးဆယ်သာ” (ကျောင်းငယ် ၃၇၀၀၊ ကျောင်းကြီး ၃၀)
ရခိုင်ထီးနန်းကျဆုံးခြင်း - “ဥသြရီသောက် ထီးနန်းပျောက်”
မြောက်ဦးမြို့ အိမ်ခြေပေါင်း- “ပန်းမဉ္ဖူ ကြိုင်ကြိုင်မွေး”
အသစ်တွေ့ရှိလျှင် အောက်တွင် ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါ။
၁ဝ ၊ ၄၊ ၂၀၁၄။
Posted by Eagle info dash at 10:27 No comments:
Labels: Article, ထိုချင့်ဒေချင့်, အမျိုးသားရေးကဗျာ
About Kyauk Phyu Special Economic Zone
Prospective enterprises of the Kyauk Phyu SEZ
A wide variety of ports, including an oil tanker port ware houses for storage, an export zone is also available.
Seafood production industries to sustain and process fish, cru stance systems are teeming in abundance and the zone itself would be used asatransit zone.
Opportunities for hotels, golf clubs, relaxation resorts with numerous water sports such as yacht sailings, water-skiing, scuba diving, windsurfing, etc.
Enterprises for further development of the Kyauk Phyu SEZ
Opportunities for building business complex including banking, shopping premises, office buildings, restaurants and stores
Residence zone for employees of the Special Economic Zone and their dependents
Opportunities for gas-based industries to develop Power Plants generated by natural gas, LNG industries, ammonia and fertilizer plants and methanol plants. Opportunities for building wood-based industries
Contemporary Circumstances of the Land
Potential sites for the Kyauk Phyu SEZ have been designated yet.However, negotiation and discussion can be undergone with comments provided by interested developers.
We hereby would like to invite developers and investors for the Kyauk Phyu SEZ.
Kyauk Phyu Town in Rakhine State is situated on Yanbyae Island which is in South-Western part of Myanmar.
Area of Kyauk Phyu District 3704.04 sq miles
Population of Kyauk Phyu District 581984
Kyauk Phyu Township 678.38 sq miles
Yanbyae Township 506.738 sq miles
Man-Aung Township 202.05 sq miles
Aun Township 2316.88 sq miles
A Feasibility Study foradeep-sea port andarailway project has been studied. On 20.12.2009 an MoU had beer signed between the CITIC (China) and the Ministry of National Planning and Economic Development.
On 16.2.2011,asupplementary (6) months of the MoU was also signed. But the MoU had since expired and the project had been dropped.
Data of Muse-Kyauk Phyu Railway Project
Length of Railway = 513.75 mile
No of Stations = 79
No of small and large bridges = 365
Total length of bridges = 139.75 mile(27.20 %)
The longest bridge = 25.46 mile
Total no: of tunnels = 94
Total length of tunnels = 86.50 mile(16.84 %)
The longest tunnel ( Gote-Twin Tunnel) = 5.90 mile
Total no: of tunnels and bridges = 459
Total length of tunnels and bridges = 226.25 mile(44.04 %)
Maximum Degree of Turns = 1.94 Degree
Maximum Slope = 1;40 (2.5 %)
Type of Railway = Standard Gauge(1435 mm)
Infrastructure of the Kyauk Phyu SEZ.
There are Air, water and High way transportation. For Communications there are auto telephones and mobiles.
For health purposes, township hospitals and special medical centers are now available. Although electric power is through generators withinashort time, the national power plant will distribute electric power.
Kyauk Phyu, Yanbyae and Madae islands now have driknking water facilities. The infrastructure is now quite available.
Stream-lining of the infrastructure is now under due consideration
Current Conditions of the Land
On the North – Eastern coastline of Yanbyae island the Northern coastline of Madae island the sea is deep and calm.
It isasuitable place to buildadeep-sea port as mangroves on the North- Eastern coastline of Yanbyae serve as natural barriers.
Varieties of marine life flourish, such as fishes, prawns and lobsters, etc. An enterprise forafishing industry can thrive and prosper.
At Yanbyae island’s western coastline, there isalength sandy be ace, ideal for beach resorts.
There are prospects for more natural gas fields in the near future.
The Rakhine Mountain Ranges are rich with natural forests, trees and bamboos, and therefore there is potential for forest industries and facilities for woodwork.
In Kyauk Phyu District, an Oil and Gas Terminal built by the Shwe natural gas production enterprise on Madae island
The project to buildapipeline to China
An MoU between the Ministry of Energy and the China National Petroleum Cooperation (CNPC) on 16.6.2009 and now being developed.
This natural gas pipeline which will transport natural gas from Rakhine coast to China now underway.
Production per day – Up to 500 million cubic feet of natural gas
Advanatages of the Special Economic Zone
Registered Investment and all it entails such as licenses, permits available at one stop service centers
Tax benefits and incentives in accordance with international standards with in SEZ.
Same benefits for investors, foreigner and local alike, in accordance with international standards,alevel playing field is established.
Posted by Eagle info dash at 10:16 No comments:
နိုင်ငံတကာကို ကြောက်လို့ ဒေသခံကို ထုတဲ့ အစီအရင်ခံစာလား
~~~“နိုင်ငံခြားသူ Ms. Yvonne Dunton သည် သဘောရိုးဖြင့် အလံကို ဖြုတ်သိမ်း ခဲ့သည်။” ဤစာပုဒ်အရဆိုလျှင် ရခိုင်များသည် သဘောမရိုးခဲ့ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေသည်။
~~~“နိုင်ငံခြားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကတည်းက ရောက်ရှိခဲ့ပြီး။”
ဒါဆိုလျှင် သူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့စရိုက်ကို ကောင်းကောင်းသိရှိထားသူဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို ထောက်ခြင်းပင်လျှင် သူမသည် အလံကို ဖြုတ်သိမ်း စရာအကြောင်းမရှိပေ။ တကယ်လို့ “နိုင်ငံတော်အစိုးရအပေါ် ဆန့်ကျင်ဆောင်ရွက် သည့်သဘော သက်ရောက်သဖြင့်”အရ သူမက အိမ်ရှင်ကို အကြောင်းကြားသင့်ပေသည်။ ဒါကတော့ သူတို့ MoU ထိုးထားချက်အရ ငြိစွမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အသိပေးသင့်ခဲ့သည်။ သတင်းအမှားများ ဖြစ်ခဲ့လျှင်တောင် အစိုးရက အချိန်မှီစစ်ဆေးပြီး ထုတ်ပြန်သင့်ခဲ့သည်။ အခုက အစိုးရကိုယ်တိုင်း သတင်းထိန်းချန်ထားမှုကို တွေ့ရသည်။ အခင်းဖြစ်ရက်မှာ ၂၆ ရက် တစ်ရက်တည်းသာ ဖြစ်သင့်ခဲ့သော်တောင်မှ ၂၇ ရက်နေ့ ဖြစ်ပျက်မှုသည် အစိုးရနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်သည်။
~~~“မမှန်မကန်စည်းရုံး လှုံ့ဆော်သူ အချို့၏ ပယောဂကြောင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားအချို့မှ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် အထင် အမြင် လွဲမှားမှု ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။”
ဒါကတော့ လုံးဝလက်ခံလို့ မရသော အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ NGO, INGO တွေကိုယ်တိုင်းက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့ပါ။ လမ်းမှာ တွေ့သမျှသော ရခိုင်များကို မေးကြည့်လိုက်လျှင် အဖြေပေါ်ပါလိမ်မယ်။ သို့သော် အဖျက်ဆီခံလိုက်ရသော အိမ်ရှင်များကို မေးခဲ့လျှင် အဖြေတော့ တစ်မျိုးပြောင်းသွားနိုင်သည်။ ယင်းအဖြေသည် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအရ အများကို ကိုယ်စားမပြုပေ။
~~~“ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားသည့် သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်လိုသော စိတ်ဆန္ဒအလျှင်း မရှိ ကြောင်း ပေါ်ပေါက်သည်။”
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စိတ်ဆန္ဒကို ပြဿနာဖြစ်ပြီးမှ သွားမေးလျှင် ယခုလိုမျိုး အဖြေပေးမှုကို ရဲများနှင့် တရားသူကြီးများသာ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ်မယ်။ စိတ်ဆန္ဒအလျှင်း မရှိလျှင် ပြဿနာကို အလျှင်အမြန် ဖြေရှင်း၍ ရမည်။ သူမ၏ “စိတ်ဆန္ဒအလျှင်း မရှိ”ဟု အစီရင်ခံစာ၏ ကောက်ချက်ချမှုသည် တစ်ဆိတ်လွန်သလားဟု မေးကြည့်ချင်ပါသည်။
~~~ ဒေသခံများသည် NGO, INGO များပေါ်တွင် အယုံအကြည်လုံးဝ ကင်းမဲ့လျှက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်၏ ပြည်တွင်းရေးကို စွက်ဖက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ၂၀၁၃ ခုနှစ် NGO, INGO များက ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့များတွင် သန်းခေါင်စာရင်းကို ကြိုတင်ကောက်ယူခဲ့မှုများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။ ကောလဟာလကြောင့် ဖြစ်ရလျှင် အစိုးရ၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှု တာဝန်နည်းမှုကို သိရှိနိုင်သည်။ အစိုးရသတင်းဌာနများမှ အချိန်မှီထုတ်ပြန်ခဲ့သင့်ပေသည်။ သတင်းထုတ်ပြန်မှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများသည် ယခင်အစိုးရလက်ထက် ယခုအစိုးရလက်ထက်ထိရှိနေသည်။
~~~“ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်း ၁၈ ဖွဲ့”ဆိုထားသည်။ ကုန်ခဲ့သော ပြည်နယ်လွတ်တော်တွင် အဖွဲ့ပေါင်း ၆၈ ဖွဲ့ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ အစိုးရနှင့် တရားဝင် စာချွန်လွှာ ထိုးထားသည်မှာ ၁၅ ဖွဲ့သာရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ယခု ၁၈ ဖွဲ့ဆိုလျှင် စာချွန်လွှာ မထိုးထားသောအဖွဲ့များ ပါဝင်နိုင်သည်ကို သိရှိုနိုင်သည်။
အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်လျှင် အစိုးရမှ နိုင်ငံတကာ ဖိအားကို ရှောင်လွဲစေချင်သည့် သဘောများကို တွေ့ရသည်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဥပဒေစိုးမှုအားနည်းခြင်း၊ လုံခြုံရေးများ၏ အချိန်မှီထိန်းသိမ်းနိုင်မှု နည်းပါးခြင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရ၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှု နောက်ကျခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းထားမှုများကို မတွေ့ရှိရပေ။ “ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသော အကူ အညီပေးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် ကုလ သမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရည်မှန်းချက် တာဝန် များကို မူလအခြေအနေအတိုင်း”သည် နောက်ထက်ပြဿနာကို ဆက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကြောင်းမူ ကုလ သမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အိမ်ဈေးများကို အဆမတန်ပေးမှု၊ အိမ်များကို လိုအပ်သည်ထက် ငှါးရမ်းမှုများကြောင်း၊ ကန့်သတ်ချက်မရှိ ကားများကို စိတ်ကြိုက်ငှါးယူမှုများ၊ အလှူအတန်ပေးသောအခါတွင်လည်း ဒေသခံများ ငတ်ပြတ်မှုကို လျစ်လျူမှုများရှိခြင်းတို့သည်လည်း အဓိကကျသည့် အကြောင်းအရင်းများဖြစ်သည်။ ၄င်းကိစ္စကို အစိုးရမှ အစိုးရဌာနပိုင်နေရာများတွင်သာ အခြေချပေးသင့်သည်။ နောက်ထပ် ကုလ သမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများများအနေဖြင့်လည်း ဒေသခံများ၏ ယုံကြည်မှုကို အထက်အလျှောက် လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးသင့်သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်မှုများ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို လုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်။ တခြားနိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များတွင် ၀င်ရောက် မစွက်ဖက်သင့်ပေ။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်တို့၏ ဂါမပညတ်ချက်များကို လိုက်နာသင့်ပေသည်။ ယင်းဂါမပညတ်ချက်သည် ကုလ သမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းချက်များကို မည်သို့ ထိခိုက်လိမ်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း အထောက်အလျောက် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ ပြီးလျှင် အစိုးရနှင့် ကုလ သမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ MoU သဘောတူညီချက်များကို ဒေသခံများကိုလည်း ထုတ်ပြသင့်ပေသည်။ အလှူပေးသည့် အလှူရှင်များသည့် ဘာအဖွဲ့က ဘာပေးသည်ကို ဒေသခံများ အမြင်ရှင်းနိုင်သောကြောင့် ဤအချက်သည်လည်း အလွန်အရေးကြီးကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ သိထားသင့်ပေသည်။
နောက်နောင် ယခုကဲ့သို့ မဖြစ်ပေါ်မှုအတွက် ဒေသခံများ၏ ခံစားချက်များကို ပို၍ အလေးထားသင့်ကြောင့် အစီရင်ခံစာကောက်ယူသည့် လူကြီးမင်းတို့လည်း သိသင့်ပေသည်။
၉၊ ၄၊ ၂၀၁၄။
ခြွင်းချက် - ယင်းသို့ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဖျက်ဆီးများကို ကျနော်တို့လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါသည်။
Posted by Eagle info dash at 12:24 1 comment:
Wai Hun Aung
Posted by Eagle info dash at 12:22 No comments:
Labels: Article, Bangali
မေသင်္ကြန်ဟိန်(မြစ်မခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၂၊ ရန်ကုန်မြို့။
ရိုဟင်ဂျာခေါ်..ဘင်္ဂါလီတွေက ကျမ...တို့ တိုင်းပြည်အတွက်တော့ တကယ့်ပြဿနာလို့ ပြောဆိုသုံးသပ်ကြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်လည်း တကယ့်ကို ပြဿနာကြီးဖြစ်သလို မြန်မာပြည်အတွက်ကလည်း တမျိုးသားလုံးအတွက် ပေါ့ဆမေ့လျော့ထားလို့မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထားတွေမှာလည်း ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်လာရပါတယ်။ (ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာဟာ ဘယ်လောက်ကြီးမားနိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ အဆက်ပါ၊ ပထမပိုင်း မဖတ်ရသေးရင် ဒီမှာ မှာဖတ်လို့ရပါတယ်။
ပြဿနာကို ဘယ်သူ ဖန်တီးခဲ့တာလဲ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတောဒေသတွေမှာ နေထိုင်သူတွေရဲ့ ၉၀%က ဘင်္ဂါလီတွေ၊ ၇ %က သာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလို့သိရပြီး၊ ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေက ၃% လောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ ကြားရစဉ်က ကျမအနေနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်မှာ အပြစ်တင်ခဲ့မိပါတယ်။ သမိုင်းအထောက်အထားတွေနဲ့ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ကျမတို့အနေနဲ့ လ၀ကနဲ့ နစခ တွေအပေါ်မှာပဲ အပြစ်ပုံချနေကြတာ အလုံးစုံ မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာလည်း တွေ့မြင်လာရပါတယ်။
ကိုလိုနီခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ် တို့လက်အောက်သို့ ကျမတို့တိုင်းပြည် ရောက်သွားခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားနယ်များနဲ့ ရခိုင်ပြည် တစ်ပေါင်းတည်းတည်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ၁၈၃၉ခုနှစ်မှာ မြေရိုင်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် ဂရံကြီး ဥပဒေတစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ထိုဥပဒေအရ ချမှတ်ထားနဲ့ နယ်မြေအမြောက်အများအတွက် အလုပ်သမားများအနေနဲ့ စစ်တကောင်းမှ ဘင်္ဂါလီများ၊ မဒရပ်မှ ဆူရတီများ အများအပြားဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကတည်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မွတ်ဆလင်များက သီးခြား မွတ်ဆလင်နိုင်ငံထူထောင်ပေးဖို့ ဗြိတိသျှအစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ မွတ်ဆလင်အများစု ရှိတဲ့ အိန္ဒိယအနောက်ဘက်ဒေသနဲ့ အိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ဒေသတွေကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအဖြစ် ထူထောင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ အဆိုပါ တောင်းဆိုမှုမှာ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတောရှိ ဘင်္ဂါလီတို့က ပါကစ္စတန်နဲ့ ပေါင်းပြီး နိုင်ငံထူဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း ခင်ကြီးဖျော် ရခိုင်ပြည်နယ် မူဂျာဟိန်းဟူသည် ရခိုင်တန်ဆောင်နှစ်လည် မဂ္ဂဇင်း ၁၉၅၉-၆၀(စာမျက်မှာ ၉၉)မှာ ဖော်ပြထားတာကို သမိုင်းအထောက်အထားအနေနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။
ဗြိတိသျှတို့အနေနဲ့ မွတ်ဆလင်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်က မှားကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပေမဲ့ တဖက်မှာလည်း မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း လမ်းကြောင်းပေး၊ အကြုံပြုခဲ့ကြောင်း၊ ထိုလမ်းကြောင်းချက်များအတိုင်း ဘင်္ဂါလီတို့ကလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁၉၄၇ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနက တင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာမှာ မောင်းတောနဲ့ဘူးသီးတောင်နယ်ကို Frontier Area သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်များ ကိုင်စွဲထားပြီး၊ အရှေ့ပါကစ္စတန်ဧရိယာအတွင်း ပါဝင်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်း series 10/1,Acc No.641,NAD အရ သိရှိရပါတယ်။
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဖဆပလ ခေတ်မှာလည်း မူဂျာဟစ်ပါတီအနေနဲ့ မြို့နယ်ဖဆပလ ဥက္ကဌ ဦးစံထွန်းအောင်မှ တဆင့်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်သွင်းပြီး တောင်းဆိုချက် စာတမ်းပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
အဆိုပါ တောင်းဆိုချက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများအားလုံးကိုလည်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ရခိုင်မွတ်ဆလင်အနေနဲ့ သတ်မှတ်လက်ခံပေးရန်၊မူဂျာဟစ်များကို ရခိုင်မွတ်ဆလင်သေနပ်ကိုင်တပ်အနေဖြင့် သီးခြားထားပေးရန်။ အစိုးရဌာနတိုင်းတွင် မွတ်ဆလင်များကို အရည်ချင်းအလိုက် ၀င်ခွင့်ပြုရန် စတဲ့…အချက်အလက်များပါဝင်သော တောင်းဆိုချက်များစွာဖြင့် လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးရတဲ့အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ၁၉၅၇ စက်တင်ဘာ ၂၀ စာတွဲ(၄) ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ညီလာခံမှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
ဖဆပလအစိုးရအနေနဲ့ ထိုအချိန်က မဲအနိုင်ရရှိရေးအတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဦးဧမောင်(ခ)အဒူလာဒစ်ရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ ဘင်္ဂါလီများကို ခေါ်သွင်းလာခဲ့ပြီး ဘူးသီးတောင်ဒေသမှာ အဘူခိုင်ဆိုသူက ဖဆပလဥက္ကဌ၊ လ၀က တို့နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ဘင်္ဂါလီများကို မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခြင်းပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအမှားဟာ ရခိုင်ပြည်ကို နောင်တွင် ဒုက္ခရောက်စေသော အမှားဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု မှတ်တမ်း 0H/p/0360/2009အရ သိရပါတယ်။
ဖဆပလခေတ်မှာ မွတ်ဆလင်အမတ်များနေရာရလာပြီး ၀န်ကြီးအဆင့်ရာထူးများပါ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဘင်္ဂါလီပေါင်းများစွာ ၀င်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖဆပလခေတ်သမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်မှုမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီသမိုင်းကြောင်းကို သိနားလည်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အာဏာရရှိချိန်မှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘင်္ဂါလီတွေကို မျက်နှာသားမပေးခဲ့ပဲ တောင်းဆိုချက်မှန်သမျှ ပါယ်ချခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရလက်ထက်မှာ မွတ်ဆလင်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်များကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ပြည်နယ်အနေနနဲ့လည်း ရခိုင်နဲ့ မွန်ကိုသာ ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်မှ ဘင်္ဂါလီများက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမွတ်ဆလင်များအဖြစ် ရေးသားတင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
အဆိုပါ ရေးသားတင်ပြမှုကို ပါလီမန်အမတ်ဟောင်း ဂဖါးမှ စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၂၁ ရက်နေ့ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု လည်းကောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာစကားဟု လည်းကောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု မောင်းတောမြို့နယ်သမိုင်းမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
နဂါးမင်း စီမံချက် ပြည်ပမှ နိုင်ငံခြားသားများ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် နဂါးမင်း စီမံချက်ကို ၁၉၇၈ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။ ထိုစီမံချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့ပြီး တရားမ၀င်နေထိုင်နေသော ဘင်္ဂါလီများအနေနဲ့ ကြောက်လန့်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းများက ပြောပါတယ်။
ထိုစဉ်နဂါးမင်း စီမံချက်ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ ထွက်ပြေးသွားရသော ဘင်္ဂါလီခေါ် ရိုဟင်ဂျာတို့က ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအစိုးရက မွတ်ဆလင်များကို မျိုးပြုတ်အောင် သတ်ဖြတ်နေသည်ဟု သတင်းလွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်၊ မလေးရှားစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ သတင်းစာတွေမှာသာမက အနောက်နိုင်ငံအချို့မှာ ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုကိစ္စကြောင့် မြန်မာအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ကို ၀ိုင်းဝန်းရှုံ့ချခဲ့ပြီး၊ ထိုပြဿနာဟာ ကုလသမဂ္ဂထိရောက်ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ်စဉ်သမိုင်း၊စတုတ္ထတွဲမှ ဖော်ပြချက်များနဲ့ နိုင်ငံတကာမှ သတင်းမှတ်တမ်းများအရ သိခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအနေဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီများကို စစ်ဆင်ရေးများ အစဉ်တဆက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်အား ၁၅၀၀၀ (တစ်သောင်းခွဲ) ခန့်ရှိသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီများသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ စစ်ဆင်ရေးများမှ လွတ်မြောက်ရန် ဘင်္ဂါလီတို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲသို့ ပြန်လည်ပုန်းခိုကြသပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာလည်း အထူးစစ်ဆင်ရေးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီ ၂၀၀၀၀၀ (၂သိန်း) ခန့်ကိဘင်္ဂလားးဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးများကို "ဘ၈င်္ါလီအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး" ဟူသာလူသိများပြီး အစိုးရကိုလည်း နိုင်ငံတကာကရှုံ့ချခြင်း ခံခဲ့ရကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)) နှင့် ဆွေးနွေးမှုများအရ နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်ဂါလီများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် နေထိုင်ရန်ပြန်လည်လက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၈၈နောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာအမည်ဖြင့် ရပ်တည်လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ ဘင်္ဂါလီများက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၈၉ခုနှစ် ၊ ၁၉၉၁-၉၂ခုနှစ် နဲ့ ၂၀၀၂ခုနှစ်များမှာလည်း အစိုးရက စစ်ဆင်ရေးများထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်စစ်ဆင်ရေးအပြီးမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီ စုစုပေါင်း ၂၅၀၀၀၀ (၂သိန်းခွဲ) ခန့်ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရာမ၀င် ၀င်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးကြောင့် မြန်မာအစိုးရကို အာဆီယံနိုင်ငံများအဖွဲ့မှ မူဆလင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမူဆလင်နိုင်ငံများ ၊ မကာအခြေစိုက် မူဆလင်အဖွဲ့အစည်း (Rabita-al-Alam-I-Islami (Muslim World League)) တို့ရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဖိအားပေးမှုများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနမှတ်တမ်း၊မော်ကွန်းဌာနမှ မှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ အစိုးရ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီများကို ပြန်လည်လက်ခံရပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီစုစုပေါင်း ၂၃၀၀၀၀ ခန့်ကို နိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်ခွင့် ပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ လှုပ်ရှားမှု ဘင်္ဂါလီတို့အနေနဲ့ မေလ ၁၃ ရက်နေ့ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မောင်တောဒေသက ရခိုင်များကို နှိမ်နင်းနိုင်သောနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၁၉၈၈ခုနှစ်မေလ ၁၃ ရက်နေ့ည ၉နာရီအချိန်မှာ မောင်းတောမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်မြို့သစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကို စတင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ၊ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်ခြင်းစတဲ့ ဆူပူလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစုရဲ့ မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားချက်အရသိရပါတယ်။
ထိုစဉ်ကာလမှာလည်း ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အမှတ်(၂) လုံထိန်းများက ရခိုင်ပြည်သူများနှင့်အတူ ခုခံကာကွယ်ခဲ့ရကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုမှာလည်း မောင်တောမှဘင်္ဂါလီခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာထွန်းအောင်(အဒူလောက်)နဲ့စစ်တွေမြို့မှ ဘင်္ဂါလီရှေ့နေ ရွှေမောင်ဆိုသူကလည်း ဘင်္ဂါလီတို့မှာရိုဟင်ဂျာများဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်သို့ ၀င်ရောက်လာသည်မှာ အေဒီ ၆၈၀ ခန့်ကပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခွင့်အရေးရလျှင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် တန်တူရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီရလျှင် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟောပြောသွားကြောင်း ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီများ ပြဿနာစာတမ်း၊စာ ၁၄၆မှာ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ထို့နောက် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ကြရာမှာလည်း အမျိုးသားပါတီက ၃၁ရက်နေ့ မတ်လ ၁၉၈၉ ခုနှစ် နေ့စွဲနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ နိုင်ငံရေးသမိုင်းနှင့် အနာဂတ်ရခိုင်ပြည်ဟူသော စာတမ်းကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ထိုစာတမ်းမှာ ရခိုင်မွတ်ဆလင်များကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု ယုံကြည်အောင်ရေးသားထားကြောင်း မောင်းတောမြို့နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်းမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်လည်း ဂျပန်တွင်အခြေစိုက်သော (မြန်မာနိုင်ငံရိုဟင်ဂျာများအသင်း- ဂျပန်ပြည်)ဇော်မင်းထွဋ်က ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားရိုဟင်ဂျာများ ဟူသော အမည်ဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေကို ဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်း၊ထို့နောက်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမှာ အမှန်တကယ်ရှိကြောင်း စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အင်တာနက်များမှာ ရိုဟင်ဂျာ ၀က်ဆိုက်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း စိမ့်ဝင်နေခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်သူတွေရှိပါတယ်။
လူ့အခွင့်ရေးဟု ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်ရင်း ကမ္ဘာအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာအဖြစ် လက်ခံရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းလည်း ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ သမိုင်းအထောက်အထားများအရ သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့ ယခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို စဉ်းစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း နားလည်မိပါတယ်။
''ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိဘူး။ ရခိုင်၊ မြို၊ ခမီ၊ ကမန်၊ သက်၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကြီး ဆိုပြီး ရခိုင်လူမျိုး ခုနစ်မျိုးရှိတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တစ်ဖက်နိုင်ငံက တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားလူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို အမေရိကန် သံရုံးကရော၊ အမေရိကန် အစိုးရကရော သိဖို့ လိုတယ်။ ပြီးတော့ စဉ်းစားပါလို့ ပြောလိုတယ်။ ဒါကို ပြောချင်တယ်။
ရိုဟင်ဂျာဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလို့ ပြောပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ ဖန်တီးနေတာသည် ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်ဖို့ ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖို့ ဖန်တီးနေတာ ဖြစ်တယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ခိုးဝင်လာပေမယ့် ရခိုင်တွေက သည်းခံနေတယ်။ လက်ခံကြတယ်။ အတူတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေကြတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ပေးထားတယ်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်း သားဆိုပြီး လှုံ့ဆော်မှုမျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ အခု မီးလောင်သွားတဲ့အိမ်တွေမှာ ရခိုင်အိမ်တွေက အများဆုံးပဲ။
ဒါတွေကို ဘင်္ဂါလီတွေ ခံရတယ်ဆိုတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ရခိုင်တွေ သေတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေ ပြောင်းလာခဲ့တယ်။
အဲဒါကြောင့် အဲဒီရွာတွေဟာ ဘင်္ဂါလီရွာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ကြိုတင်ပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး ဒါကို ကမ္ဘာက သိဖို့လိုတယ်။ အမှန်သိမှ ဖြစ်မယ်''လို့
ရခိုင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ ခုလို သုံသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းခေတ်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေကို မောင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်၊ ၁၉၈၈ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်နေ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ ယခုအစိုးရအနေနဲ့ သတိထားကိုင်တွယ်ရမဲ့ ပြဿနာဖြစ်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်တယ်လို့ ကျမယူဆမိပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာနဲ့ အရေးဟာ ကျမတို့အတွက်တော့ အမျိုးသားရေးပါ။မြန်မာပြည်ကို ကာကွယ်ရမဲ့ အရေးလို့ပဲ ကျမအနေနဲ့ မြင်မိပါတော့တယ်။
D264 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊မော်ကွန်းဌာနုစု D272 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊
မော်ကွန်းဌာနုစု D1313 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု၊
၁၉၈၈ D1315 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနုစု D1316 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနုစု D1317သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနု D1318 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနု D1319သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊
မော်ကွန်းဌာနု DR491(56)၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု Series 10/1,Acc,No,641.NAD MF-962၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု OH/P/ 0354/2009၊
သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု OH/P/ 0355/2009၊တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်၊
သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု OH/P/ 0356/2009၊တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်၊
သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု ရခိုင်ဒေသတွင်းသို့ မွတ်ဆလင်များ ၀င်ရောက်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့် ၊သမိုင်သုတေသနဦးစီးဌာန။ ၂၀၀၉-မတ်လ။ ခင်ကြီးဖျော်၊ ရခိုင်ပြည်မှမူဂျာဟိန်းဟူသည်၊ ရခိုင်တန်ဆောင်၊ အတွဲ - ၁၊ အမှတ် - ၈ ၊ ၁၉၅၉-၆၀ စံထွန်းအောင်ဦးကိုယ်တွေ့ မေယုနှင့် ရိုဟင်ဂျာ၊ (လက်နှိပ်စာမူ) စံသာအောင်၊ ဦးအာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာ စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ ရခိုင်ရာဇာဝင်သစ်၊ (ပ) တွဲ၊ ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၃၁ ဇော်မင်းထွဋ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားရိုဟင်ဂျာများ၊ (ပထမအကြိမ်)၊ Maruyama Corp,Tokyo၊ ၂၀၀၃ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ညီလာခံမှတ်တမ်း(၁၉၅၇ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်)စာတွဲ(၄) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ၁၉၉၉ ပဏ္ဍိ၊ဦးဓည၀တီရာဇ၀င်သစ်၊ ပြည်မကြီးမဏ္ဍိုင် ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၁၀ ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ လက်နှိပ်စက်စာမူ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း၊ အပိုင်း(၂) ဖော်ဇံ၊ `ရခိုင်နယ်စပ်မှ ဗိုလ်ချင်းပျံ၊ ဓည၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ နှစ်လည်(၁၉၅၂ - ၅၃) ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်သမိုင်း၊ ဘုံပေါက်သာကျော်၊ တော်လှန်ရေးခရီးဝယ်၊ သတင်းဂျာနယ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၇၃ ဘုံပေါက်သာကျော်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘဂါင်္လီများပြဿနာစာတမ်း၊ ၁၉၈၉ ၊ လက်နှိပ်စာမူ၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ၁၉၈၉မောင်တောမြို့နယ်ဖြစ်စသ်သမိုင်း၊ သမိုင်းပြုစုရေးအဖွဲ့၊ မောင်တောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ၊ ၁၉၈၁၊ လက်ရေးမူ မောင်တောမြို့နယ် ၊၂၈-၂-၂၀၀၈ မောင်တောမြို့နယ် အနာဂတ် သာသနာတော်အရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်တင်ပြလျှောက်ထားချက်၊ ၂၈-၉-၁၉၈၈ မောင်ထင်` ရခိုင်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ´၊ မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၀၊ ဇူလိုင်၊ အတွဲ ၈ မူဂျာဟစ်များအလင်းဝင်ခြင်း၊ မြ၀တီပုံနှိပ်တိုက်၊ စာမျက်နှာ ၊ ခုနှစ်မပါ။ မြန်မာမင်းများ အရေးတော်ပုံ၊နံ့သာပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၆၇ ရခိုင်အားမာန်(၂) ၊ရခိုင်သမိုင်းသုတေသနအသင်း၊ ၁၉၉၆ ရသေ့တောင်မြို့နယ်သမိုင်းဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း၊ မြို့နယ်သမိုင်းဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းပြုစုရေးအဖွဲ့၊ ရသေ့တောင်၊ ၁၉၈၁ ။
Posted by Eagle info dash at 14:37 No comments:
Posted by Eagle info dash at 19:52 No comments:
How are different between INGO and USDP government activities in Arakan stste.
ဗဟို အစိုးရ နဲ ရခိုင်ရောက် INGO တွေ့ရဲ့ တူညီတဲ့ အခြေခံ သဘောထားတစ်ခု ရှိတယ်။၊
ဒါကတော့ ခေါတော ဘင်္ဂလီ တွေကို ရခိုင်ပြည်ကနေ ပြည်မ ထဲကို ထွက်မသွားစေရေး ဘဲ။
သူတို့ သာထွက်သွားရင် INGO တွေ စားခွက်ပျောက်ပြီ ( အရှေ့ အရှ မှာ ဒီလို စားဂွင် တွေ မရှိသလောက် ရှားသွားပြီ၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လဲ တောင် အာရှဒေသ၊ အာရပ်နိုင်ငံတွေ နဲ အာဖရိက နိုင်ငံတွေ ထက်စာရင် ရခိုင်က အနေရ အတော်ချောင်တော့ ဒီဒေသ မှာပဲ ကုတ်တပ်ပြီး အလုပ်လုပ်ချင့်တယ်)။
ဘင်္ဂလီတွေ ရခိုင် မှာ မရှိတော တည်ငြိမ်လာပြီး ဒေသ ဖွံဖြိုးရေ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွတ်လာမှာ ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ခေါင်းမာ ဂိုဏ်းသားတွေ မနှစ်မြို့လိုပဲ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့ နိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ကို လေ့လာကြည့်တော့ လွတ်တော်မှာ မဲ(၂) နေရာရဖို့တွက် ဘင်္ဂလီတွေကို ၀ိုက်ကာတ် ထုပ်ပေးပြီး နိုင်ငံ ရဲ နယ်မြေ တစိတ်တဒေသ ကို မဲ နဲ အလှဲအလှည့် လုပ်ပြီး ရောင်းစားလိုက်ခြင်းပဲ။
( ဒါကတော့ ဗဟို အစိုးရ နဲ ရခိုင် ရောက် INGO တွေ့ရဲ တူညီတဲ အခြေခံ သဘောထား တစ်ခုပါ)။
Posted by Eagle info dash at 17:26 No comments:
ကျွန်တော် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ မန္တလေး ကို ကရာတေး ပြိုင်ပွဲ ရှိလိုလားခါ၊ ပြိုင်ပွဲပြီးလို့ ဖုရားတိ ဖူကတ်တေမှာ ရန်ကင်းတောင် ကို ရောက်ပါရေ… တောင်ထက်ကို တက်လို ပြန်ဆင်းခါ တောင်အောက်က ဖုန်းကြီးကျောင်းကို ၀င်ပြီး အနားယူ ဂတ်ပါရေ… ပြိုင်ပွဲ မှာ နာလာရေ လူတိက ကောင်းလမ်း မလျှောက်နိုင်လို ။
ယေမှာ သံဃာ တိက လာလိုမိန်းကတ်တေ .. နီမကောင်းကတ်လား ဆိုပြီးကေ ..ယေပိုင် နဲ ဖုန်းကြီးတပါးကြွလာ( အသက်ကောင်းကြီးနီဗျယ်) ပြီးကေ.. ဆီးတိုက်ဖို လုပ်တေ၊ သူက ဆရာ ၀န် ဆိုပြီး ကေ မိတ်ဆတ်လို…သိရခါ၊ စကားပြောယင်းနဲ ရခိုင်သား ကျွန်တော် ပါလာရေ ဆိုခါ ဇာကလဲ မိန်းခါ ယပိုင်ပြောယင်းနဲ ကျွန်တော် အဘောင်မ အိမ်မှာ ဆီးခန်းထိုင်ခရေ အကြောင်းတိကို ပြောပြရေ။ ပြီးကေ သူကျောင်းကို ခေါ်လားပြီး အသေအခြာ ဧည့်ခံလို စကားပြောရေ။ ယင်းမှာ ဆရာတော်က ဖုရားတစ်ပါး ကို လက်ညိုးထိုပြရေ တကာချေ အသေအခြာကြည်လတ်..။ (ရခိုင်စကားနဲ) ယင်း ဆင်းတုတော် အောက်မှာ သစ်သားပြားနဲ ရီးထားရေ စာတစ်ခု… ဘစော်ဖြူ မင်းကြီး နန်းဦးဖုရား....။
ဆိုပြီးကေ…။ ယကေ အရှင်ဖုရား ဒေကို ရောက်စော်ကြာဗျယ်လား ဆိုကာ ဖုန်းကြီးက ငါ ရခိုင်မဟုတ်၊ ငါက အရင်က ခရစ်ယာန် ဆိုကေ၊ လူနာမည်က ကျော်မင်း ၊ မော်လီ။ ဆိုရေ။ ရခိုင်ကို ရောက်မှ ဗုဒဘာသာ ဖြစ်တေ ဆိုရေ။ 0k ဇာပင်ဖြစ်ဖြစ် ၀တ္တု ငွေ ကတ်ပြီး ပြန်လာရေ။
ယပိုင်နဲ အိမ်ရောက်ခါ မါမီ ကို မိန်းကြည်ခါ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်စော် ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခရေ ။ ပြီးကေ သူ ဗုဒဘာသာ ကိုပြောင်းရေ၊ သူ အိမ်ရှင် မတိနဲ သူ သားသမီးက သူ ကို စွန်လွတ်လားရေ၊ သူရခိုင်သမိုင်းကို လေလာရေ၊ သူဗမာပြည်ပြန်လားခါ ရခိုင်ဖုရားတိ သံတ္တာ တစ်လုံးနဲ အပြည့် ပါလားရေ လို့ သိမ့်ပါလာရေ။
ဇာပင်ဖြစ်ဖြစ် ယင်း ဖုန်းကြီး ပြရေ ဆင်းတုတော်စော် ဘစော်ဖြူ မင်းကြီး ၏ နန်းဦး ဖုရား ဖြစ်ဖိုဆိုစော် စိတ်ထဲ ထင်မိရေ။ ယင်းဆရာဝန် အကြောင်းကိုလဲ အယင်လူတိ သိကတ်ဖို့ရာ…။
ယကေ … ရခိုင် ရှေးဖုရားကို ယင်းဆရာဝန် ဖုန်းကြီး ပျံလွန်လိုရှိကေ အသူလက်ထဲ ရောက်နီလဲ။
( ရန်ကင်းတောင် ဘေးက ဖုန်းကြီးကျောင်းထဲ ၀င်စော်နဲ ဘယ်ဘတ် ဆရာဝန်ကိုတော် လိုခေါ်ရေ)။
Posted by Eagle info dash at 17:15 No comments:
၂၆.၃.၂၀၁၄ နေ.က နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလည်.ခရီးသည်များအား ဧည်.လမ်းညွှန်အဖြစ်ကျွန်တော်လိုက်ပါဝန်ဆောင်မှုပေးရပါသည် ။ သူတို.အား Elephant Coach ဟုအမည်ပေးထားသော ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် ချက်ပလက်ကားကြီး ၃ စီးဖြင်. ရန်ကုန်မြို.တွင်းလိုက်လံပြသရခြင်းဖြစ်သည် ။ ကားများကို မူလချက်ပလက်အရသာမပျက်စေပဲ အတွင်းပိုင်းတွင် လေအေးပေးစက်များတပ်ကာအကောင်းစား ဆိုဖာထိုင်ခုံခြောက်လုံးတပ်ဆင်ပြီး ကျွန်းသစ်များဖြင်.အလှဆင်ထားသောကြောင်.နိုင်ငံခြားသားများအထူးနှစ်သက်စွာစီးနင်းကြသော ကားခရီးစဉ်ဖြစ်သည် ။ ကားတစ်စီးလျင် ဧည်.သည်ခြောက်ဦး ဂိုဒ်တစ်ဦးလိုက်ပါလာသဖြင်. ချက်ပလက်ကား သုံးစီးတွင် ဧည်.လမ်းညွှန်သုံးယောက်လိုက်ပါလာကြပါသည် ။ အထူးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို.ကားရှေ.မှ ယာဉ်ထိမ်းရဲတစ်ဦးကဆိုင်ကယ်ဖြင်.လိုက်ပါလမ်းရှင်းပေးပါသည် ။ ထိုနေ.ကပထမဆုံး ရပ်နားရမည်.အစီအစဉ်အဖြစ် ရွှေတိဂုံဘုရား အနောက်ဖက်တည်.တည်. ပြည်သူ.ရင်ပြင်ရှေ.သို. ကားသုံးစီးရောက်လာကြပါသည် ။ နိုင်ငံခြားသားများခေတ္တရပ်နားပြီး ဘုရားရှုခင်းကိုဓါတ်ပုံရိုက်ရန်ဖြစ်သည် ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ပြည်သူ.ရင်ပြင်ရှေ.၌ လူတို.စုရုံးနေကြပါသည် ။ လူဝတ်ကြောင်များရော သံဃာတော်များလဲပါပါသည် ။ ဆိုင်းဘုတ်များ ၊အလံများကိုကိုင်ဆောင်ထားသဖြင်. သေချာပေါက်ဆန္ဒပြနေခြင်းဖြစ်သည်ကိုသိလိုက်ပါသည် ။သို.သော်ဘာအတွက်ဆန္ဒပြနေသလဲမသိပါ ။ နိုင်ငံခြားသားများကမေးသဖြင်. သူတို.ကိုင်ဆောင်ထားသောကြွေးကြော်သံဆိုင်းဘုတ်များကိုဖတ်လိုက်သောအခါမှ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံရာတွင် ဘင်္ဂလီများကို ရိုဟင်ဂျာဟူသောနာမည်ထည်.သွင်းကောက်ခံမည်.အစီအစဉ်ကိုဆန်းကျင်ကန်.ကွက်နေကြခြင်းဖြစ်
ကြောင်းသိလာပါသည် ။ နိုင်ငံခြားသားများကိုလည်း ဘင်္ဂလီများ သူတို.ကိုယ်သူတို.ရိုဟင်ဂျာဟု လူမျိုးစာရင်းဝင်လာအောင်လိမ်လည်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းရသမျှအချိန်တိုတိုအတွင်း ရှင်းပြလိုက်ပါသည် ။ သူတို.ကလည်းဤသို.လူစုလူဝေးဖြင်.ရွှေတိဂုံဘုရားနောက်ခံထား၍ဆန္ဒဖ်ာထုတ်နေသောမြင်ကွင်းကိုအလွန်ထူးဆန်းအံ.သြနေကြပါသည် ။ ကျွန်တော်ကလည်း ဘင်္ဂလီတို.၏လိမ်ဆင်များကမ္ဘာသို.ပျံ.နှံ.စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင်. ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လျင်အားရပါးရရိုက်ကြပါဟုခွင်.ပြုလိုက်ပါသည် ။ သို.သော် ကျွန်တော်.ဧည်.သည်များကားအောက်သို.ပင်ဆင်းခွင်.မရလိုက်ပါ ။
ဖြစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို.ဂိုဒ်သုံးဦးတွင်တပ်မတော်မှစစ်သားလူထွက်ဗိုလ်မှူးဟောင်းတစ်ယောက်ပါပါ သည် ။သူသည် ဗိုလ်မှူးဘ၀မှအငြိမ်းစားယူကာ ဧည်.လမ်းညွှန်ဘ၀သို.ကူးပြောင်းလာသူဖြစ်သည် ။ ထို ဧည်.လမ်းညွှန်သည် စစ်သားစိတ်မကုန်သေးသဖြင်.ဆန္ဒပြလူထုကိုတွေ.လိုက်ရသောအခါ မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားကာသူ.ဧည်.သည်နိုင်ငံခြားသားများကို ကားပေါ်ဇွတ်အတင်းပြန်တက်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော်တို.ကိုဘာမှမတိုင်ပင်ပဲ လျင်မြန်စွာကားမောင်းထွက်သွားပါသည် ။ထိုအချိန်တွင်ကျွန်တော်သည်ကားပေါ်မှပင်မဆင်းရသေးသဖြင်. ရှေ.ကားဘာကြောင်.မောင်းထွက်သွားသလဲဆိုတာမသိပါ ။ ခရီးသွားကုမ္မဏီက ဆန္ဒပြသူတွေကိုမပြချင်သဖြင်.မောင်းထွက်သွားခိုင်းသဖြင်.နေရာပြောင်းပြီးပြရမည်ဟုထင်ကာကျွန်တော်တို. ကားနှစ်စီးလဲနောက်မှလိုက်မောင်းပါသည် (အမှန်မှာခရီးသွားကုမ္မဏီမှ ထိုသို.မောင်းထွက်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပဲ စစ်ဗိုလ်လူထွက် ဧည်.လမ်းညွှန် ကသူ.ဘာသာမောင်းထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်မှသိရပါသည် ) ။ ကားများမှာလည်းဘယ်ကိုသွား၍ဘယ်နောက်လိုက်ရမည်မသိသောကြောင်.တစ်ယောက်တစ်စီးကစင်.ကလျား ဖြစ်သွားကြပါသည် ။ ထိုအခါမှကျွန်တော်သည် တပ်မတော်သားတို.၏အတွင်းစိတ်ကိုလှစ်ကနဲတွေ.မြင်လိုက်ပါသည် ။ သူတို.သည် (တပ်မှအငြိမ်းစားယူပြီးသည်.တိုင်) ဒီမိုကရေစီကိုကြောက်ပါသည် ။ ဆန္ဒပြသည်ကိုကြောက်ပါသည် ။ ထို.ထက်အလွန်ပြောရလျင် ပြည်သူလူထုကိုကြောက်ပါသည် ။ ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကို ဘာအတွက် ဘာကြောင်.ဟုမစောကြောမဝေဖန်ပဲ မမြင်အပ် မကြည်.အပ်သော မသမာသောကိစ္စကြီးတစ်ခုကဲ.သို.သဘောထားကြောင်းပါးစပ်ကဖွင်.မပြောသော်လည်းပေါ်လွင်နေပါသည် ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထိုနေ.က ပြည်သူ.ရင်ပြင်တွင် သန်းခေါင်စာရင်း၌်ရိုဟင်ဂျာအမည်သွတ်သွင်းမှုဆန်.ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကို မကြည်.လိုက်ရသော်လည်း ကံအားလျော်စွာပင် မြို.တော်ခန်းမအနီး တရားရုံးချုပ်ရှေ.တွင် တပ်မတော်မှမြေအသိမ်းခံထားရသောမိချောင်းကန်အပိုင်း(၂)ှ ရပ်ကွက်ပြည်သူလူထုမှ သပိတ်စခန်းဖွင်.ကာအားရပါးရ ဆန္ဒပြနေကြသည်ကိုတော. ထပ်မံတွေ.မြင်ခဲ.ရသဖြင်. ဧည်.သည်များဓါတ်ပုံရိုက်ခွင်.ကြည်.ရှုလေ.လာခွင်.ရသွားပါသည် ။ တပ်မတော်သားဟောင်းဧည်.လမ်းညွှန်ကတော.သူ.ဧည်.သည်တိုးရစ်များကို ထိုမြင်ကွင်းအားပြသည်မပြသည်ကိုကျွန်တော်မသိတော.ပါ ။တစ်ယောက်တစ်ဖွဲ.ခွဲ၍ွဲလမ်းလျောက်ကြသဖြင်. မသိခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်ကတော.မြန်မာနိုင်ငံမှမြေသိမ်းယာသိမ်းဖြစ်ရပ်များကို နိုင်ငံခြားသားများအား အကျဉ်းရုံးရှင်းပြလိုက်ပါသည် ။
စစ်သားတစ်ယောက်၏ ပြည်သူလူထုအပေါ်ထားသောစိတ်သဘောထားကိုကြုံကြိုက်သဖြင်.လှစ်ဟပြခြင်းသာဖြစ်၍ ဤဆောင်းပါးတွင်အဓိကပြောလိုသောအကြောင်းမှာ မင်းသားခေါင်းဆောင်း၍ နိုင်ငံတကာတွင်သနားစဖွယ် ပလီပလာအမြဲလုပ်လေ.ရှိသော ဘင်္ဂလီများသည် ယခုတစ်ကြိမ်တွင်တော.တပ်ဦးကျွံသွားကာ ၎င်းတို.၏ပက်စက်သောအကြံများ ဖုံးမနိုင်ဖိမရဖြစ်လာကြပုံကိုပြောလိုရင်းဖြစ်သည် ။ယခင်အခါများစွာကအမြဲလိုပင်သူတို.ကိုယ်သူတို. မြန်မာပြည်မှ လူနည်းစုမူဆလင်များဟူ၍တစ်မျိုး ၊အဖိနှိပ်ခံရိုဟင်ဂျာများဟုတစ်ဖုံ ကမ္ဘာ.မီဒီယာများသို.အမြဲမပြတ်ဝါဒဖြန်.နေခဲ.သောဘင်္ဂလီများသည် ယခုအခါတွင်တော.ဘင်္ဂလားဒေ.ရ်ှနိုင်ငံတွင်တရားဝင်ထုတ်ဝေသော ၂၀၁၄ မတ်လ(၁၉) ဒါကာထရီဗြွန်း ( Dhaka Tribune ) သတင်းစာတွင် ယူကရိန်းနိုင်ငံ ခရိုင်းမီးယားဒေသသို. ရုရှားတပ်ဖွဲ.၀င်များဝင်ရောက်ကာ ခရိုင်းမီးယားပြည်သူများရုရှားနှင်.ပူးပေါင်းလိုခြင်းရှိမရှိ ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပသလို မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ဘူးသီးတောင် ၊မောင်တော ၊စစ်တွေဒေသများကို ဘင်္ဂလားဒစ်ရ်ှနှင်.ပူးပေါင်းလိုခြင်းရှိမရှိ ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပသင်.ကြောင်း မြန်မာ.အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင် ချိုးဖောက်ကာ နှပ်ကြောင်းပေးရေးသားထားတာတွေ.ရလေသည် ။ ထိုအခါ ဤရေးသားမှုမှအောက်ပါအချက်နှစ်ချက်ကို ရှေ.ကဖုန်းနောက်ကပေါ်ဆိုသကဲ.သို.ထင်ထင်ရှားရှားတွေ.ရလေသည် ။
ပထမအချက်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာများသို.တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ဝါဒဖြန်.နေသောကိစ္စဖြစ်သည်.ရခိုင်ဒေသမှ မူဆလင်လူနည်းစုဆိုသောကိစ္စဖြစ်သည် ။ ပြည်တွင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများကတော.ဘူးသီးတောင်မောင်တောဒေသတွင် လူနည်းစုမှာ ဗုဒ္စဘာသာရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်၍ လူများစုမှာဘင်္ဂလီမူဆလင်များသာဖြစ်ကြောင်း တစ်နိုင်ငံလုံးသိပါသည် (သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြည်.လျင်ပို၍တိတိကျကျသိလာနိုင်ပါသည် )။ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ရန်နှပ်ကြောင်းပေးရေးသားလာခြင်းသည် ဘူးသီးတောင် ၊မောင်တော ဒေသများ၌ မူဆလင်ဦးရေ အဆမတန်များပြားနေပြီဖြစ်ကြောင်း တစ်ဖက်လှည်.၍၀န်ခံရာရောက်ပေသည် ။ လူနည်းစုဆိုသောစကားသာမှန်ခဲ.လျင်မည်သူသည် မဲဆန္ဒခံယူရဲမည်နည်း ။ လူဦးရေအသာစီးရပြီဟုယုံကြည်၍သာထိုသို.ပြောဝံ.ခြင်းဖြစ်သည် ။ သူတို.ထိုသို.ရဲရဲကြီးပြောဝံ.သောအခြေအနေသို.ရောက်အောင်လည်းအာဏာပိုင်အဆက်ဆက်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး (အနောက်ဘက်တံခါးလုံခြုံရေး)ကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလစ်လျရှုခဲ.ကြပါသည် ။ အဂတိလိုက်စားမှုများ ၊နိုင်ငံရေးမဲအသာရလိုမှုကိုအမျိုးသားရေးနှင်. အလဲအလှယ်လုပ်ခဲ.မှုများသည်ပဋိပက္ခ၏မူလဇစ်မြစ်ဖြစ်သည်။အကြောင်းမရှိပဲအကျိုးမဖြစ်ဟူသောမြတ်ဗုဒ္စ၏တရားတော်အရ အာဏာပိုင်များပေါ.လျော.ခဲ.သောဒဏ်ကိုယခုအခါမြန်မာတစ်ပြည်လုံးစတင်ခံစားနေရလေပြီ ။ယူကရိန်းတွင် ခရိုင်းမီးယားဒေသသည် ရုရှများ ၊ရုရှားလိုလားသူများ ၊ ရုရှားစကားပြောသူများဖြင်.ခြေချင်းလိမ်နေပေသည် ။ ထိုအခြေအနေသည် ပြည်ထောင်စု၏နယ်မြေတစ်ခုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရသည်အထိဖြစ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာကိုအကောင်းဆုံးတပ်လှန်.သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည် ။မြန်မာပြည်၍လည်း မိမိ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းဖြစ်ပါလျက် မြန်မာစကား ၊ ရခိုင်စကား ၊ ရှမ်းစကား များမပြောပဲ တရုတ်စကား ပြော ၊တရုတ်ငွေကိုသုံး ၊တရုတ်ပြည်ကိုသြဇာခံ ၊ တရုတ်မြေပုံကိုအသုံးပြုနေသူများ၊ ဘင်္ဂလီစကားပြော ၊ ဘင်္ဂလီ ငွေကိုသုံး ၊ဘင်္ဂလား၏သြဇာကိုခံနေသောဒေသများလည်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရှိလာနေသည်မှာစိုးရိမ်ဖွယ်အနေအထားဖြစ်သည် ။
ဒုတိယ ထောက်ပြလိုသောအချက်မှာ ကျွန်တော်တို.စာရေးဆရာများမကြာခနထောက်ပြလေ.ရှိသော်လည်းအစိုးရပိုင်းမှဘယ်တော.မှအရေးတယူစဉ်းစားလေ.မရှိသော RSO ( The Rohingya Solidarity Organization ) ဟူသောဘင်္ဂလီသူပုန်များ၏ ရခိုင်ဒေသတွင် မေယုတောင်တန်းဒေသကိုခြေကုတ်ယူကာ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံထူထောင်လိုသောမဟာရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည် ။ထိုရည်မှန်းချက်ဖြင်. ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ.ဆိုသော ကုလားဆိုးသောင်းကျန်းသူအဖွဲ.သည် ဘူးသီးတောင် ၊မောင်တောနယ်စပ်ကိုအခွင်.ရလျင်ရသလိုစစ်ရေးဖြင်.အကြိမ်ကြိမ်ကျူးကျော် ခဲ.ဖူးသည် ။ ၁၉၄၂ တွင် ဘင်္ဂလီများမှလက်နက်အင်အားလူအင်အားအလုံးအရင်းဖြင်. မောင်တောနှင်.ဗူးသီးတောင်မြို.နယ်များရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများကိုတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးပစ်ကာ ထိုတိုက်ခိုက်လုယက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင်. ရခိုင်လူမျိုး နှစ်သောင်းကျော် သေဆုံးခဲ.ရပြီး ရခိုင်ကျေးရွာပေါင်းများစွာ ဖျက်ဆီးခံခဲ.ရကာယခုအချိန်အထိ ပြန်လည်နာလန်မထူနိုင်တော.ပဲ ဘင်္ဂလီများကြီးစိုးရာ ဒေသဖြစ်သွားရသည်. သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ.ဖူးပါသည် ။၁၉၈၈ တွင်လည်း လုံခြုံရေးအားနည်းနေမှုကိုအခွင်.ကောင်းယူကာ ဘင်္ဂလီများကမောင်တောမြို.အားသိမ်းယူရန်ကြိုးစားခဲ.ဖူးသည် ။ ဘင်္ဂလီအင်အားစုစုပေါင်း (၅၀,၀၀၀ ) ခန်.ရှိသော်လည်းရဲနှင်.လုံထိမ်းတပ်ရင်းတို.ကပြန်လည်ခုခံနိုင်ခဲ.သောကြောင်. ၎င်းတို.၏ကြိုးပန်းမှုမအောင်မြင်ခဲ.ပါ ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ. ( RLO )သောင်းကျန်းသူအဖွဲ. ဦးဆောင်သော ဘင်္ဂလီအင်အား (၅၀၀၀ )ခန်.သည် မောင်တောမြို.သို.ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာကာ ဗုဒ္စဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများကိုဖျက်ဆီးခြင်း ၊ ဗုဒ္စဘာသာဝင်များနေထိုင်သော ရပ်ကွက်များကိုမီးရှို.ခြင်း ၊ရခိုင်လူမျိုးမှန်သမျှကိုသတ်ဖြတ်ပြီး မောင်တောမြို.ကိုသိမ်းပိုက်ရန်အပြင်းအထန်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်လာခဲ.ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ.မှု ပြန်လည်ခုခံတားဆီးကာကွယ်နိုင်ခဲ.ပါသည် ။ ဤဖြစ်ရပ်များကိုကြည်.လျင် နိုင်ငံငယ်သော်လည်း လူဦးရေအဆမတန်ပေါက်ဖွားနေသော ဘင်္ဂလားဒစ်ရ်ှသည် ရခိုင်ဒေသကို အစ္စလမ်ဘာသာသို.သွတ်သွင်းလျက်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတည်ထောင်ဖို.ဘယ်လောက်အာသီသရှိနေကြမှန်းရိပ်စားမိပေ မည် ။
ဤအခြေအနေ၍ ကျွန်ုပ်တို.သည် သံခင်းတမန်ခင်းဖြင်.ပြုံးပြုံးလေးနေ၍ ရတော.မည်.အချိန်မဟုတ် ။ အစ္စရေးနိုင်ငံကဲ.သို. ပြတ်ပြတ်သားသား တုန်.ပြန်ရတော.မည်ဖြစ်သည် ။ ယခုအခါ မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားသော ဘင်္ဂလီ ၀ါဒဖြန်.သမားတို. ဂိုးရလိုဇောဖြင်.လူကျွံဘော ( Off side ) ဖြစ်ကာ ဘီလူးခေါင်းထွက်လာသောသမယဖြစ်သည် ။ သူတို.၏မသမာသောေ၇ရှည်မဟာဗျူဟာကို အကင်းမပါးသောဘင်္ဂလီသတင်းထောက်ကလှစ်ဟပြလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည် ။ တစ်ခါအလိမ်ခံရလျင် လိမ်သူ၏အပြစ် ၊နှစ်ခါအလိမ်ခံရလျင် အလိမ်ခံရသူ၏အပြစ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောစမှတ်ပြုကြပါသည် ။သုံး လေးခါလိမ်နေခဲ.သည်ကိုမှမသိလျင် မသိသူ ၏ နုံဖျင်းမိုက်မဲမှုသာဖြစ်၍ သမိုင်းနှင်.ချီကာ
ယခုပင်လျင် ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ (၁၂)ရက်နေ.က ဘင်္ဂလားဒစ်ရ်ှနယ်စပ်၌ ခြံစည်းရိုးခတ်နေသော တပ်မတော်အင်ဂျင်နီယာတပ်မှတပ်ကြပ်ကြီးခိုင်ထူးအောင်အပါအ၀င် မြန်မာစစ်သားသုံးဦး ကို အမည်မသိ ဘင်္ဂလီများ ( ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးဟူသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ.ပင်ဖြစ်ဖို.ရှိသည် ) ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်မှာသေသည်ရှင်သည်ယခုအထိမသိရပေ ။ မကြာမီကထိုမြန်မာစစ်သည်သုံးဦး ကိုထိုင်လျက်အနေအထားနှင်. မူဆလင်စစ်သားအချို.ကသေနတ်နှင်.ချိန်ထားသောဓါတ်ပုံကိုတူရကီသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြကြောင်းအင်တာနက်၌ပေါ်ပေါက်လာသည် ။ အင်မတန်ရင်နာစရာကောင်းသောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည် ။ တူရကီဆိုသည် မှာ မူဆလင်နိုင်ငံဖြစ်သည် ။ ထိုပုံကို တူရကီသတင်းဌာနကအဘယ်သို.ရသနည်း ။ ထိုမြန်မာစစ်သားများသည် တူရကီသို.ရောက်သွားသလော ။ အဘယ်မှာရှိသနည်း ။သေသည်လော ။ရှင်သည်လော ။ တပ်မတော်သည် အဘယ်ကြောင်.ဤကိစ္စတွင် နှုတ်ပိတ်နေသနည်း ။ နိုင်ငံရေးသမားများကို ကမ္ဘာအနှံ.လိုက်လံစုံစမ်းထောက်လှမ်းဖမ်းဆီးရာတွင်တော်သလောက် သာမန်တပ်တပ်ကြီးတစ်ယောက်နှင်.တပ်သားနှစ်ယောက်ပျောက်သွားသောအခါ အဘယ်ကြောင်.စွမ်းစွမ်းတမံလိုက်မရှာသနည်း ။ ထိုပျောက်ဆုံးသွားသောသူများမှာအညတရ စစ်သားများမဟုတ်ပဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးများ၏မိသားစု အဖွဲ.၀င်များဖြစ်နေလျင်ကော ဤသို.ပဲ ၀တ်ကြေ၀တ်ကုန်ရှာကြမည်လား ။ မိုးမီးလောင်သလို တောအနှံ.တောင်အနှံ.ရှာကြဖွေကြမည်လားဆိုတာမေးစရာမလိုအောင်ပြည်သူကသိနေကြပါသည် ။ ဥပမာအားဖြင်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးတေဇ ကချင်ပြည်နယ်ရေခဲတောင်ပေါ်၍ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကြစဉ်က တပ်မတော်မှရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုသည် ယခုပျောက်ဆုံးစစ်သားသုံးဦး ကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုထက် ထင်သာမြင်သာရှိကာ အားတက်သရောရှိခဲ.ပါသည် ။ အသက်ရှင်ရန်မျှော်လင်.ချက်မရှိတော.သော မလေးရှားလေကြောင်းခရီးစဉ် MH 370 မှ ခရီးသည်နှင်.လေယာဉ်ကိုလိုက်ရှာသူများပင် မြန်မာပြည်မှစစ်သားပျောက် ရှာပုံတော်ထက်အများကြီး အားသွန်ခွန်စိုက်ရှိတာတွေ.ရပေသည် ။ လူ.အသက်သည် တန်ဖိုးချင်းတူသော်လည်း အစိုးရ အဖွဲ.များကိုလိုက်၍ တန်ဖိုးထားပုံခြင်း ကွဲပြားနေပေတော.သည် ။
ယခုအခါ ဘင်္ဂလားဒစ်ရ်ှဘက်မှဆောင်းပါးရေးကာ ဗြောင်ကျကျစိမ်ခေါ်လိုက်ပေပြီ ။ မြန်မာအစိုးရကဘင်္ဂလားဒစ်ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို. သတိထောက်လွှာပေးအပ်လိုက်သည်ဟုသိရ၏ ။ ၀တ်ကြေ၀တ်ကုန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစာအုပ်ကြီးအတိုင်းလုပ်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနှင်.ဟုဆုတောင်းမိပေသည် ။ ယခုအခါ ဘင်္ဂလီတို.၏၀ါဒဖြန်.မှုကိုနားယောင်နေသောအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်က ဘင်္ဂလီများအားရိုဟင်ဂျာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကာနိုင်ငံသားခံယူခွင်.ပေးဖို.မဆီမဆိုင် ၀င်ရောက်ပြောဆိုနေချိန်လည်းဖြစ်သည် ။ လူသားခြင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးအပ်ရမည်. NGO အဖွဲ.အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်. Malteser International အဖွဲ.မှ စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး အမေရိကန်နိုင်ငံသူ Mrs .Y. Vonne Dunton က ၎င်းငှားရမ်းနေထိုင်သော အိမ်မှ သာသနာ.အလံကိုဖြုတ်ချ၍ ခါးမှာပါတ်ပြီးစော်ကားခဲ.သဖြင်. စစ်တွေမြို.တွင်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများဖြစ်ကာ သေနတ်ပစ်ဖောက်လူစုခွဲရာမှ ကလေးငယ်တစ်ဦးသေနတ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ.ကြောင်းသိရပါသည် ။ အရာရာသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင်. သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကာနီးမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် ။ ဤကိစ္စတွင် အစိုးရသည်ဒေသခံ မြန်မာ ၊ရခိုင်များကိုသာတစ်ဖက်သတ်အပြစ်ပုံမချပဲ ရောမရောက်လျင်ရောမလိုကျင်.ရမည်ဟူသော စကားကိုနားမလည်ပဲအိမ်ရှင်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင်.ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကိုစော်ကားခဲ.သောထိုအမေရိကန်နိုင်ငံသူကိုလည်း ဘာသာရေးအကြည်ငြိုပျက်စေမှု ၊ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ကိုစော်ကားမှုတို.ဖြင်. ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသင်.ပေသည်။ပျော.ညံ.နေရမည်အချိန်မဟုတ်တော.ပေ ။
ဘင်္ဂလီများဘက်က ဘီလူးခေါင်းဆောင်းကိုလှစ်ဟပြလိုက်ပြီဖြစ်ရာ မြန်မာက တီးလုံးပြောင်းကာ ဘီလူးဆိုင်းပြန်ထွက်မလား ။ ဘင်္ဂလီနှင်.ကကွက်ညီအောင်ပါတ်ကြမ်းတိုက်ကာ ဗိန်းဗောင်းတီးမလား ။ မိဘပြည်သူများဆိုသောတယောလေးနှင်.အပျော.ဆွဲဆွဲကာ ယိုးဒယားအကလေးနှင်.ပဲ လုပ်သမျှခံကာ ပြည်ဖုံးကားချမလားဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားများကစောင်.ကြည်.နေကြပေသည် ။
Posted by Eagle info dash at 08:20 No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်သာမက ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် အခြားနေရာများ၌လည်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် လူမျိုးအမည် ရိုဟင်ဂျာဟု ပြောဆိုမှုများရှိနေ
၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းေ...ခါင်စာရင်းကို မတ် ၃၀ ရက်မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ စတင်ကောက်ယူလျက်ရှိရာ လူမျိုးအမည်အတွက် ရိုဟင်ဂျာဟု ပြောဆိုမှုများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်သာမက ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် အခြားနေရာများ၌လည်း ရှိနေကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် မေးခွန်း ၄၁ မျိုး မေးမြန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းဖြေဆိုရမည့် မေးခွန်း ၂၀ နှင့်အတူ အိမ်ထောင်ကျဖူးသူ အမျိုးသမီးတိုင်း ဖြေဆိုရမည့်မေးခွန်းများ၊ အိမ်အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းများ၊ အိမ်ထောင်စုသားများထဲမှ နိုင်ငံခြားသို့ ရောက်ရှိနေသူများရှိပါက ဖြေဆိုရမည့်မေးခွန်းများနှင့် လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း အိမ်ထောင်စုသားများထဲမှ သေဆုံးခြင်းအကြောင်းအရာဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
"အခုဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာဆိုလို့ရှိရင် ဘာလို့ထည့်မကောက်တာလဲဆိုပြီး မေးလာတာရှိတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးဖြေဆိုတာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရော ရန်ကုန်မှာရောရှိတယ်။ နေရာဒေသအသီးသီးကနေ ကျွန်မတို့ဆီကို ရိုဟင်ဂျာဆိုလို့ရှိရင် ဆရာမတွေက မရေးသွားဘူး ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုပြီးတော့ မေးပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာမရှိဘူး။ ကျွန်မတို့ အထက်ကနေပြီးတော့လည်း ရိုဟင်ဂျာလို့ဖြေဆိုရင် မရေးခဲ့ပါနဲ့လို့ ကျွန်မတို့ကို မှာပါတယ်ရှင့်"ဟု အရေးပေါ်တယ်လီဖုန်းလိုင်း ၁၈၄၀ မှတစ်ဆင့် သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဦးဝင်းမြိုင်ကလည်း "ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ တချို့ဘင်္ဂါလီတွေက ရိုဟင်ဂျာလို့ စာရင်းမပေးရလို့ အကောက်မခံဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က မကောက်ပါဘူး။ တိုင်းရင်သားတွေရဲ့နေရာမှာ စာရင်းကောက်တဲ့အခါ ဘာမှလုံခြုံရေးပေးစရာမလိုပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီနေတဲ့နေရာတွေအတွက်တော့ စာရင်းကောက်တွေကို လုံလောက်တဲ့ လုံခြုံရေးပေးထားပါတယ်"ဟု ပြောကြားသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် လူမျိုးအမည်နေရာ၌ ရိုဟင်ဂျာဟု ရေးမှတ်ခြင်းမပြုသောကြောင့် စာရင်းအကောက်မခံသည့်သူများ ရှိနေသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ကြိုင်က"ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာလို့ပေးခွင့်မရရင် စာရင်းအကောက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ဝှိုက်ကတ်ထဲမှာလည်း ဘင်္ဂါလီလို့ပဲရေးထားတယ်။ သူတို့က ၇၃ ခုနှစ် ကောက်တုန်းကလည်း ဘင်္ဂါလီပဲ။ ၈၃ ကောက်တုန်းကလည်း ဘင်္ဂါလီပဲ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဆွဲတင်စစ်စစ်တုန်းကလည်း သူတို့ဟာ ဘင်္ဂါလီနဲ့ပဲ ဖြေခဲ့တယ်။ အခုမှ သူတို့က အရေးပေါ်ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တစ်ခုနဲ့ လုပ်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပျက်ပြားပြီး ဆူပူမှုမဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒါတွေကို ချန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီဆိုရင် ကောက်သွားတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုရင်တော့ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ ကျော်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ လူဦးရေစာရင်းကိုလည်း ချန်/ကျန်နည်းစနစ်အရ တွက်ချက်ပြီးထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
သန်းခေါင်စာရင်းဆိုသည်မှာ လူဦးရေ စုစုပေါင်းအရေအတွက်မျှကိုသာ ဖော်ထုတ်ရရှိသည်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံလူဦးရေသိရှိမှု၊ မျိုးနွယ်စုပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှုတို့ကိုပါ ဖော်ညွှန်းနိုင်ကြောင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မရိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့် အခွင့်ကောင်းယူအမြတ်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း သတိကြီးစွာဖြင့် စောင့်ကြည့်ကာကွယ်သွားရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်း တာဝန်အဖြစ်ခံယူပြီး လူတိုင်းပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှောင့်နှေးရပ်တန့်မှုမရှိဘဲ ပြီးပြည့်စုံအောင်မြင်သည်အထိ လူတိုင်းပါဝင်ကြရန် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်းက မတ် ၃၀ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိစဉ် ပြောကြားသည်။
"အိမ်တစ်အိမ်မေးတဲ့အခါမှာ သူကရိုဟင်ဂျာလို့ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို ဘင်္ဂါလီလို့ ဖြည့်ရင်ရမယ်။ တခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကုတ်နံပါတ်တွေဖြည့်ရင်ရမယ်။ ဒီလိုရိုဟင်ဂျာလို့ပြောရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ စာရင်းရေးသွင်းမှာ မဟုတ်ဘူး"ဟု သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က မီဒီယာများကို မတ် ၂၉ ရက်က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးကောက်ယူခဲ့သည့် ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းမှရရှိခဲ့သော စာရင်းများအရ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကထက် လူဦးရေ ခုနစ်သန်းနီးပါးအထိ တိုးပွားလာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းကာလများတွင် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု အစီအစဉ်များရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှစ၍ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် စစ်တမ်းများကောက်ခဲ့ကာ မွေးနှုန်း-သေနှုန်းအခြေခံ၊ လူဦးရေ၊ ပညာအရည်အချင်းဖြင့် တွက်ချက်မှုများအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦးရေမှာ ၆၁ ဒသမ ၅၇ သန်းထိ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသည
Posted by Eagle info dash at 15:40 No comments:
သန်းခေါင်စာရင်းသပိတ် ဖြစ်စဉ်အပေါ် ကျော်ဇောဦး၏ သုံးသပ်ချက်
ကျွန်တော် ကျော်ဇောဦး ပါ။ ...
တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်များကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့ နဲ့ ပြီးခဲ့သည့် တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို သုံးသပ်ဖို့အတွက် သည် ဆောင်းပါးကို ရေးပါသည်။
မိတ်ဆွေများ၊ ရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ တိုက်ပွဲဝင်ဖော် တိုက်ပွဲဝင်ဖက်များအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း စကားများကို “အောင်မြင်စွာ သပိတ်လှန်” ပြီးသည့်နောက် ချက်ချင်း ရေးသား ပြောကြားမှု မပြုနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့ နံနက် ဆယ်နာရီ (၄၅) မိနစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းကော်မီတီ က တာဝန်ခံထုတ်ပေးသော ကြေငြာချက်ထွက်လာသောအခါ စစ်တွေမြို့ စစ်ကဲတော်မင်းကျောင်းတိုက် အစည်းအဝေး ခန်းမအတွင်းရှိ သပိတ်ကော်မီတီဝင်များ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အားလုံး လက်ခုပ်သြဘာတီး ကြသည်။
ခန်းလုံးပြည့် လူတို့၏ သြဘာသံများ လက်ပန်းပေါက်ခတ်သံများအကြားတွင် လက်ခုပ်မတီးသူမှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်သာ ရှိလေသည်။ ကျွန်တော့်မှာ စဉ်းစား သုံးသပ်နေဆဲပင် ဖြစ်လေသည်။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာ စာရိုက်သည့် အိမ်သို့ သွား၍ “အောင်မြင်စွာ သပိတ်လှန်” သည့်အကြောင်းကို စစ်တွေမြို့တွင်း အသံချဲ့စက်ဖြင့် ကြေငြာရန် နှင့် အွန်လိုင်းတင်နိုင်ရန် အတွက် စာသားကို ပြီးစီးအောင်ရေးပေးခဲ့သည်။ အသံချဲ့စက်ဖြင့် ကြေငြာပေးမည့် လူ နှင့် ရဟန်းများက ကျွန်တော့် နှင့် မနီးမဝေးတွင် စိတ်မရှည်နိုင်စွာ စောင့်ဆိုင်းကာ မြန်မြန်ရေးပေးပါ မြန်မြန်ရေးပေးပါ ဟု ရယ်ကာမောကာ အော်နေ ပြောနေခဲ့ကြသည်။
ကြေငြာမည့်စာသားကို ရေးပေးပြီးသည် နှင့် ကျွန်တော်၏တာဝန်ပြီးဆုံးလေသည်။ နေ့လယ်စာထမင်းကို ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ သွားစားပြီးနောက် တစ်လလုံးလုံး တင်းထားခဲ့သော စိတ်များကို ဖြေလျှော့လိုက်ပါသည်။ တိုက်ပွဲသည် မပြီးသေးကြောင်း နှင့် အခြားတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာ ကျန်နေသေးကြောင်း သိနေပါသော်လည်း တိုက်ပွဲများအကြားတွင် နားရန် လိုအပ်ပါသည်။
မတ်လဆန်းစ (၃) ရက်နေ့ နေ့လယ်က ဆိုလျှင် ကျွန်တော် နှင့် RNDP မိတ်ဆွေများသည် သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာအမည် ရေးသွင်းခွင့်ပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ကြောင်း RNDP ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် စာကြမ်းကို ရေးသားနေခဲ့ကြသည်။
တင်းမာမှုများရှိခဲ့သော နောက်ထပ် (၂၆) ရက်အားဖြတ်သန်းပြီးနောက် မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်မူ တင်းမာမှုများ လျော့ကျကာ သန်းခေါင် စာရင်းကောက် ၀တ်စုံဝတ်ထားသူများ လမ်းမကြီးတွင် အုပ်စုလိုက်သွားနေကြသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံပိုင် တီဗီချန်နယ် သတင်းများတွင် စစ်တွေမြို့၌ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်နေကြပုံများ သန်းခေါင်စာရင်းအကောက်ခံကြသူများ နှင့်အင်တာဗျူးများကို လွှင့်ချိန် အများကြီးပေးကာ ရုပ်သံလွှင့်သည်ကို တွေ့ရသည်။
သဘောကတော့ တွေ့တယ် မဟုတ်လား၊ ရခိုင်တွေ သန်းခေါင်စာရင်းအကောက်ခံ နေကြတယ်ဆိုတာ၊ ဆိုသည့် သဘောဖြစ်လေသည်။
သည်လိုဆိုတော့၊ မှန်းဆကြည့်ရလျှင် သန်းခေါင်စာရင်းကို ရခိုင်လူမျိုးများ တညီတညွတ်တည်း သပိတ်မှောက်ကြတော့မည့် အလားအလာကို အခိုင်အမာ မြင်နေရသည်မှာ အစိုးရမင်းတို့အတွက် အလွန်အမင်း ခေါင်းကိုက်တုန်လှုပ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းကော်မီတီ ထံမှ စာကို လက်ခံရရှိသောအခါ သပိတ်ကော်မီတီဝင်များ အတောမသတ် လက်ခုပ် တဖြောင်းဖြောင်းတီးကြသည်မှာ အစိုးရနဲ့ ဆက်ပြီးထိပ်တိုက် သွားစရာ သပိတ်မှောက်စရာ မလိုတော့သည့်အတွက် ရင်ထဲက အလုံးကြီးပြုတ်ကျပြီး ၀မ်းသာလုံးဆို့ကာ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကြသူများလည်း ပါနေလို့ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ တော်ပါသေးရဲ့ ဆိုသော သဘောမျိူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်တစ်ခုပြီးပြီ ဆိုလျှင် ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများကို ပြန်လှန် သုံးသပ်ရမည့် တာဝန်ရှိပေသည်။ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများ (lessons learned) ကား အဘယ်နည်း။
(၁) ဒေါ်လာသန်းခြောက်ဆယ်သာရမည်ဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် ရခိုင်လူမျိုးတို့အား ရောင်းစားပစ်ရန် ၀န်မလေး။ ဒေါ်လာသန်းခြောက်ရာ၊ ဒေါ်လာသန်းခြောက်ထောင် သာဆိုလျှင် ဆိုဖွယ်ရာမရှိ။
(၂) မိမိတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောတိုက်ပွဲက မိမိတို့၏ လက်ရှိအနေအထားကို ပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်နိုင်အောင် ညွှန်ပြသည်။ မိမိတို့သည် မိမိတို့ကို ၀ါးမြိုရန်ကြိုးစားနေသော ကုလားများနှင့် မိမိတို့အား ကုလားများထံရောင်းစားရန် ၀န်မလေးသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့အကြား ဆက်လက် အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်အောင် နည်းလမ်းရှာ လုပ်ကိုင်သွားနိုင်ရမည်။ မိမိတို့ရှေ့ဆက် ရင်ဆိုင်ရမည့် ပြဿနာများကား အလားတူ ပြဿနာများဖြစ်လေသည်။ စစ်မျက်နှာ နှစ်ဖက်မဖွင့်ရ ဆိုသည်မှာ အခါခပ်သိမ်းမမှန်။ အလှမ်းဝေးသည့် လုံးဝလွတ်လပ်ရေးအစား ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ရနိုင်အောင်ကိုသာ ကြိုးပမ်းရင်း ကုလား နှင့် ဗမာအကြားတွင် ရခိုင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်ကို နည်းလမ်းမျိူးစုံဖြင့် တိုးချဲ့ တည်ဆောက်သွားခြင်းသာလျှင် လက်တွေ့ကျသော ချဉ်းကပ် လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်ပေသည်။ ကုလားရန်ကိုကြောက်သည့်အတွက် ဗမာကို အခါခပ်သိမ်း ဖားရမည် ဆိုသည်မှာ မှန်ကန်မှု မရှိပေ။
(၃) မိမိတို့၏ အတွင်းစည်းလုံခြုံမှုကို အစဉ်မပြတ်သုံးသပ် တင်းကြပ်နေရန် လိုအပ်သည်။ ပြီးခဲ့သော တိုက်ပွဲကာလအတွင်း အစိုးရသည် မိမိတို့ထဲမှ အတွင်းလူများ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများကို တစ်စချင်း ဖဲ့ထုတ် နေခဲ့သည်။ အဆိုပါ သပိတ်မြန်မြန်လှန်စေလိုသူများသည် မူကို မြဲမြံစွာကိုင်ထားသူများအား အစွမ်းရောက်များ ဟု စွပ်စွဲကာ သပိတ်အနေအထားကို ယိမ်းယိုင်စေတတ်သည်။
(၄) သပိတ်ကို ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူအချို့က ပြောကြားသော ‘သပိတ်ကို မှောက်သူတို့သည် ရခိုင်လူမျိုးတို့အား ချောက်ထဲသို့ ဆွဲချနေခြင်းဖြစ်သည်’ ဆိုသော စွပ်စွဲချက်မှာ လုံးဝမှားယွင်းသည်။ ရခိုင်လူမျိုးတို့အား သန်းခေါင်စာရင်းမကောက်ခဲ့ရပါက ရခိုင်တို့ ခံစားရမည့် နစ်နာမှု၊ ရခိုင်ဆိုသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးအား သန်းခေါင်စာရင်းကောက်၍မရနိုင်ခဲ့ပါက ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ရရှိမည့် နစ်နာမှု၊ ကုလားများကသာ ရိုဟင်ဂျာ ဟု မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ရသွားပါက ရခိုင်လူမျိုးအပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုသားများ အားလုံး ခံစားသွားရမည့်နစ်နာမှု များ အားလုံး နှင့် တိုက်ပွဲအောင်မြင်ပါက ရနိုင်သည့် အကျိုးတို့အား တွက်ချက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သပိတ်ကိုသာမလှန်ခဲ့ပါက စစ်တွေအပါအ၀င် အနည်းဆုံး မြို့ငါးမြို့တို့တွင် အပြည့်အ၀ သပိတ်မှောက်ကြပြီး အခြားရခိုင်မြို့များတွင် ငါးဆယ်ရာနှုန်းထက်မနည်း သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြဖွယ်ရာ ရှိသည်။ သပိတ်ကို “အောင်မြင်စွာ” မလှန်ခဲ့လျှင် နိုင်ငံရေးအမြတ် နှင့် အခြားအကျိုးအမြတ်အချို့ မှာ သည့်ထက်မက များနိုင်သည်။ သို့သော် ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ရခိုင်လူဦးရေ ကိန်းဂဏန်း လျှော့ကျသွားမှုကြောင့် မိမိတို့ နစ်နာမှုရှိနိုင်သည်။
(၅) အကယ်၍သာ ဤကဲ့သို့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ထည့်သွင်းခွင့်မပြုဖို့ အုံကြွတောင်းဆိုခြင်း၊ ထိုအချက်ကို ဆန့်ကျင်ကာ သပိတ်မှောက်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းတို့သာ မပြုခဲ့ကြလျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် ကုလားများအား ရိုဟင်ဂျာဟု ဖြည့်သွင်းခြင်းကို အမျိုးသား အန္တရာယ် ဟု သတိမမူဘဲ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ဖွယ်ရာရှိသည်။ ထိုအချက်ကို စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်တပ်လှန့်ခဲ့သော RNDP ပါတီ ၊ ထို့နောက် (နှစ်ရက်အကြာ နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းဖို့ ခွင့်ပြုမိန့် ကျလာသည့်အတွက်) RNDP ပါတီရပ်တည်မှု ရုတ်ချင်း ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အချိန်တွင် တိုက်ပွဲ ဦးဆောင်မှုကို လက်ဆင့်ကမ်းယူလာခဲ့သော ရခိုင်လူမှုကွန်ရက် တို့မှာ သမိုင်းမှတ်တိုင်များ စိုက်ထူခဲ့သည် ဟု အသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။
(၆) သပိတ်လှန်လိုက်သည့်အချိန်မှစ၍ တာဝန်သည် အတိုက်အခံများ၏ပုခုံးပေါ်ကနေ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ပုခုံးပေါ်သို့ လုံးလုံးလျားလျား ရောက်သွားသည်။ တပ်လှန့်သူများ၊ အန္တရာယ်ကို အချက်ပေးသူများ၊ တတ်နိုင်သမျှ တိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသူများသည် ပျားလည်းစွဲသာ ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ အနေအထားဖြင့် သပိတ်လှန်ခဲ့ကြပြီးသည်နောက် ထိုအန္တရာယ်ကို ဆက်လက်ကာကွယ်ရမည့်တာဝန်သည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာက မည်သို့ပင်ဆိုဆို မည်သို့ပင် ဖိအားပေးပေး ရိုဟင်ဂျာ ဟူသည့်စကားလုံးအား သန်းခေါင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းမကျန်စေရန်မှာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
(၇) ထိုတာဝန်တို့အား ပြည်ထောင်စုအစိုးရ တာဝန်ကျေမကျေ ဆိုသည်ကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ တာဝန် အဖြစ် ရှိနေပြန်သေးသည်။
(၈) ယခုတိုက်ပွဲမှ ရရှိသော အင်အားကို ရယူပြီး နောက်ထပ် အနိုင်တိုက်ရမည့် တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာ White Card ကိုင်သူများ မဲပေးခွင့်ရှိနေခြင်းကို ဖျက်သိမ်းရမည့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲများ နှင့် အဖြစ်အပျက်များ
၁။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံမှုတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးလိမ်နာမည်အား ထည့်သွင်းခွင့်ပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၄-ခုနှစ် မတ်လ (၄) ရက်နေ့ ညကိုးနာရီတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) က ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်သည်။
၂။ နောက်တစ်နေ့ မတ်လ (၅) ရက်နေ့ နံနက် ကိုးနာရီတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ က နေပြည်တော်တွင် ရောက်ရှိနေကြသော RNDP လွှတ်တော်အမတ် အချို့အား ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံကာ RNDP က ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ထားသည့် အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးသည်။
၃။ မတ်လ (၆) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်နှစ်ပါတီ ပေါင်းစည်းခွင့်ကျလာသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပေါင်းစည်းခွင့် ကျလာသည့်အတွက် ယခင်နှစ်ပါတီ RNDP နှင့် ALD တို့၏ တည်ရှိမှုအလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သည်။ အစိုးရကမူ ထိုနှစ်ပါတီအားဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြေငြာသည်။
၄။ ၂၀၁၄-ခုနှစ် မတ်လ (၉) ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့ စစ်ကဲတော်မင်းကျောင်းတိုက် တွင် စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ “ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျုးကျော်ဘင်္ဂါလီ သန်းခေါင်စာရင်း နာမည်လိမ် တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မီတီ (စစ်တွေ)” အား ဖွဲ့စည်းကြသည်။ အဆိုပါ ကော်မီတီတွင် သြ၀ါဒ စရိယ ဆရာတော်ကြီး (၁၈)ပါး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ရဟန်းတော် (၂၁)ပါး၊ လူပုဂ္ဂိုလ် (၂၈) ဦးတို့ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည်။ ဦးခင်မောင်ကြီး၊ ဦသန်းထွန်း နှင့် ဦးကျော်ဇောဦးတို့ သုံးဦးအား ကော်မီတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူများ အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်သည်။
၅။ သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာအမည် ရေးသွင်းခွင့်မပြုရေးအတွက် မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့ပေါင်း အနည်းဆုံး ဆယ်မြို့တို့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသည်။ ကျန်မြို့များ အားလုံးလိုလို ၌မူ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအပြီးတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
၆။ ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော နာမည်လိမ်ကို ထည့်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်း ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်က ၂၁ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂-နာရီကို နောက်ဆုံးထား၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာရန် သပိတ်ကော်မီတီက ရာဇသံပေးသည်။
၇။ Zeeshan Khan ဆိုသူက ရေးသားသော “ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူထုဆန္ဒ ခံယူမှု လုပ်ရန်လိုပြီလား” ဟု ခေါင်းတပ်ထားသည့် ဆောင်းပါးကို Dahaka Tribune တွင် မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကရိုင်းမီးယား ဥပမာကို နမူနာယူကာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများအား လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပြီး ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ဘင်္ဂါလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် ပေါင်းစည်းသင့်ကြောင်း အဆိုပါ ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားထားသည်။
၈။ မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂-နာရီကို ကျော်လွန်သွားသော်လည်း ပြည်သူတို့တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုခဲ့သည့်အတွက် အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် (၂၃) ရက်နေ့အစည်းအဝေး၌ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ သန်းခေါင်စာရင်းအကောက်မခံဘဲ သပိတ်မှောက်သည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ့် သာသနာ့အလံများကို နေအိမ် အဆောက်အအုံများတွင် လွှင့်ထူပြီး သပိတ်နှိုးဆော်ခြင်းကို စတင်သည်။
၉။ မတ်လ (၂၆) ရက်နေ့ ညနေ (ရ) နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် Malteser အန်ဂျီအို အဖွဲ့မှ အမေရိကန်နိုင်ငံသူ အရာထမ်း Ms. Yvonne Dunton က ၄င်းတို့ငှားရမ်းထားသည့် အိမ်တွင် အိမ်ပိုင်ရှင်က လွှင့်ထူထားသော သာသာနာ့အလံကို ဖြုတ်ယူသည်ကို မျက်မြင်သက်သေများ မြင်တွေ့မကျေမနပ်ဖြစ်ရာမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွားသည်။ ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်၊ ဘောင်ဒွတ်သားစုရပ်ကွက်၊ ဘောက်သီးစုရပ်ကွက် တို့အတွင်း NGO များငှားရမ်းထားသည့် အဆောက်အအုံများ လူအုပ်ဖြင့် ခဲပေါက်ခြင်း ခံရသည်။
၁၀။ နောက်တစ်နေ့ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့ပေါ် နေရာအနှံ့ရှိ NGO များ ငှားရမ်းထားသည့် နေအိမ် အဆောက်အအုံများ ခဲပေါက်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည်။ ညနေ ငါးနာရီခန့်တွင် ရူပတောင်ရပ်ကွက်ရှိ WFP ဆန်ဂိုဒေါင်အနီးတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မိမိ အိမ်ဝရံတာတွင် ရှိနေသူ အပြစ်မဲ့ အမျိုးသမီးငယ် ညီးမ (၁၃ နှစ်) မှာ သေနတ် ကျည်ထိသည့် ဒဏ်ရာရသည်။ စစ်တွေ ဆေးရုံကြီးအရောက်တွင် သေဆုံးသည်။
၁၁။ ထိုနေ့တွင်ပင် စစ်တွေမြို့၌ ပုဒ်မ-၁၄၄ အရ ညမထွက်ရအမိန့် သတ်မှတ်သော အချိန်ကို ယခင် (ညဉ့်၁၂ နာရီ-နံနက် ၄ နာရီ) အချိန်သတ်မှတ်ချက်မှ ည ၆ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီထိ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်သည်။
၁၂။ လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရအရာရှိကြီးများ နှင့် ဦးခင်မောင်ကြီး၊ ဦးကျော်ဇောဦး၊ ဦးသာပွင့်၊ ဦးသန်းထွန်း တို့ခေါင်းဆောင်သော “ကျူးကျော်ဘင်္ဂါလီ သန်းခေါင်စာရင်း နာမည်လိမ် တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မီတီ” တို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရရုံးတွင် မတ်လ (၂၉) ရက် ညနေပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။ တိကျရှင်းလင်းသော အဖြေကို မရခဲ့။
၁၂။ ၂၀၁၄-ခုနှစ် မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့ နံနက် ဆယ်နာရီ လေးဆယ့်ငါးမိနစ် အချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် သတ်းခေါင်စာရင်းကော်မီတီက ပြည်ထောင်စု အစိုးရက လွှဲအပ်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုကြောင်း ကြေငြာချက်တစ်စောင်ကို စစ်ကဲတော်မင်းကျောင်းရှိ သပိတ်ကော်မီတီသို့ လာရောက်ပေးအပ်သည်။ သပိတ်ကော်မီတီ အနေဖြင့် “အောင်မြင်စွာ သပိတ်လှန်” လိုက်ကြောင်းကို စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် အသံချဲ့စက်များဖြင့် ကြေငြာသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံသို့ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားသည်။ ယင်းနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်လုံး၌ သန်းခေါင်စာရင်းကို စတင်ကောက်ခံသည်။
Posted by Eagle info dash at 14:23 No comments: